Confucius ကွန်ဖြူးရှပ် ဇာတိမြို့ ခရီးအမှတ်တရ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » Confucius ကွန်ဖြူးရှပ် ဇာတိမြို့ ခရီးအမှတ်တရ (၁)
Confucius ကွန်ဖြူးရှပ် ဇာတိမြို့ ခရီးအမှတ်တရ (၁)
Posted by weiwei on Nov 24, 2010 in Photography, Travel |9comments
တလျှန်မှ ရန်းထိုင်သို့ စီးခဲ့ရတဲ့ သင်္ဘော
ကွန်ဖြူးရှပ် အဆိုအမိန့်နဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေရေးထားတဲ့ကျောက်ပြား
ကျောင်းသားတွေ အပန်းဖြေတဲ့ နေရာ
လောင်ဇူ ရုပ်ထုနဲ့ စာသင်ဆောင်များ
ကွန်ဖြူးရှပ်ကို တရုတ်လို ခုန်ဇယ် (kong zi, 孔子) လို့ခေါ်တယ်။ ဘီစီ ၅၅၁ ခုမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဇာတိကတော့ ယခု ရှန်းတုန်း (Shandong) ပြည်နယ်၊ (Qufu) မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်ကျော် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တစ်ခုမှာ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြို့ကလေးက ရွာကလေးတစ်ခုသာသာပဲရှိပါတယ်။ အဲဒီကိုသွားခဲ့ပုံက အမှတ်တရဖြစ်လွန်းလို့ သွားပုံသွားနည်းလေးကိုပါ ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့တွေက (Dalian) တလျှန်မြို့ကနေ (Yantai) ရန်းထိုင်မြို့ကို သင်္ဘောနဲ့ သွားပါတယ်။ အဲဒီ ၂ မြို့ကြားမှာ yellow sea ပင်လယ်တစ်ခုခြားနေပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ ပထမဆုံး သင်္ဘောစီးဖူးတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောကြီးက တော်တော်ကောင်းတယ်။ အထပ် ၅ ထပ်ပါတယ်။ အထဲမှာလဲ အိပ်ခန်းအဆင့်မြင့်ကနေ နောက်ဆုံး ပလက်စတစ်ထိုင်ခုံအထိပါတယ်။ မှန်နဲ့အလုံပိတ်သင်္ဘောဆိုတော့ သင်္ဘောသွားနေတာကို ခံစားလို့မရပါဘူး။ ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ ထွက်ပြီး မနက် ၃ နာရီခွဲလောက် ရန်းထိုင်ဆိပ်ကမ်းကိုရောက်ပါတယ်။
ရန်းထိုင်ကနေ ကွန်ဖြူးရှပ်မြို့ကို ရထားထပ်စီးရအုန်းမှာပါ။ ရထားက မနက် ၉ နာရီမှာမှ ထွက်မှာဖြစ်ပြီး လက်မှတ်ကလဲ ကြိုမ၀ယ်ထားတော့ ဘူတာမှာပဲ အပေါ်ကပုံထဲကလို ခွေအိပ်ပြီး မိုးလင်းအောင် စောင့်နေရပါတယ်။ အဲဒီဘူတာကတော့ သာမန်တောကျကျ ဘူတာရုံကလေးပါပဲ။ မနက် ၇ နာရီထိုးတော့ လက်မှတ်စရောင်းတယ်။ ကံဆိုးစွာပဲ ထိုင်ခုံနဲ့ဝယ်မရလို့ ထိုင်ခုံမဲ့နဲ့ ရထားပေါ်တက်လိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးကျည်ဆံရထားကနေ အနှေးဆုံးရိုးရိုးရထားအထိ အမျိုးအစားပေါင်းစုံရှိတဲ့အထဲမှာ ကျွန်မတို့စီးလိုက်ရတဲ့ရထားကတော့ အဆင့်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တညလုံးအိပ်ရေးပျက်တာရော ရထားက အဆင်မပြေတာရောကြောင့် ကျွန်မတို့လဲ တော်တော်စိတ်ညစ်ရတယ်။ ရထားက ညနေ ၅ နာရီမှ ရောက်မှာဆိုတော့ သူများတွေ လမ်းမှာဆင်းကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းနေရတာပေါ့ … အဲဒီလိုနဲ့ ထိုင်ခုံတစ်ခုံရရင် တစ်ယောက်တစ်လှည့်ထိုင်ရတယ်။
ကွန်ဖြူးရှပ် ဇာတိမြို့ရောက်တော့ ပထမဆုံး ကွန်ဖြူးရှပ် တက္ကသိုလ်ကို သွားလည်ပါတယ်။ တောမြို့ကလေးမှာ အဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့ တက္ကသိုလ်ရှိနေတာ အံ့သြစရာပါ။ နံမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ သိပ်မကွာတဲ့အတွက် ဗဟုသုတရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရက ကွန်ဖြူးရှပ်ကျောင်းတွေကို ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ သွားရောက်ဖွင့်လှစ်ပြီး တရုတ်စာပေယဉ်ကျေးမှုကို ကမ္ဘာကသိအောင် အခမဲ့ဖြန့်ဖြူးနေပါတယ်။
နောက်ထပ် ပို့စ်တွေကျရင်တော့ ကွန်ဖြူးရှပ် ဘုရားကျောင်း၊ ကွန်ဖြူးရှပ် အုတ်ဂူနဲ့ သူမွေးဖွားရာနေရာတွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးရင်း သူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အတွေးအခေါ်တချို့ကိုလဲ ဘာသာပြန်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
ဘူတာမှာ အားလုံး အိပ်နေတာ အတုံးအရုန်းဘဲ.. ကင်မရာမန်းလည်း အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ရိုက်ထားတာ ဖြစ်ရမယ်
ခပ်စုတ်စုတ် ဘူတာလေးနဲ့ ခပ်စုတ်စုတ်ရထားက အဲဒီအဆင့်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြချင်လို့ထည့်လိုက်တာ … တက္ကသိုလ်ပုံနဲ့ တရုတ်ကျောင်းသားတွေကိုထည့်လိုက်တာကလဲ အရင်နေ့တွေက တရုတ်ပညာရေးအကြောင်းပြောထားလို့ နဲနဲဆက်စပ်လို့ရအောင် ..
ထိပ်ဆုံးပုံထဲမှာ မဝေက ဘောင်းဘီတိုနဲ့ အားကစားအင်္ဂျာီနဲ့ ခါးထောက်ပြီး ဗွီရှိတ်လက်ထောင်ပြနေတာ ယောက်ျားလေးနဲ့ ပိုတူတယ်။ ကိုကြောင်ကြီး တူမနဲ့တောင် သဘောတူချင်လာပြီ။
တရုတ်သူငယ်ချင်း ကောင်လေး (၄) ယောက်ရယ် ကျွန်မတို့က ဗမာ (၂) ယောက်ရယ် နောက်ထပ် နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသူတစ်ယောက်ရယ်အတူတူသွားတာပါ … ပုံထဲကတစ်ယောက်က အခုလောလောဆယ် အမေရိကန်မှာ ကျောင်းတက်နေပါတယ် .. တူမနဲ့သဘောတူရင် မိတ်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ် …
Siddhārtha Gautama (Sanskrit: सिद्धार्थ गौतम; Pali: Siddhattha Gotama) wasaspiritual teacher from ancient India who founded Buddhism. In most Buddhist traditions, he is regarded as the Supreme Buddha (P. sammāsambuddha, S. samyaksaṃbuddha) of our age, “Buddha” meaning “awakened one” or “the enlightened one.” [note 1] The time of his birth and death are uncertain: most early 20th-century historians dated his lifetime as c. 563 BCE to 483 BCE, but more recent opinion dates his death to between to between 486 and 483 BCE or, according to some, between 411 and 400 BCE.
Confucius (Chinese: 孔子; pinyin: Kǒng zǐ; Wade–Giles: K’ung-tzu, or Chinese: 孔夫子; pinyin: Kǒng Fūzǐ; Wade–Giles: K’ung-fu-tzu), literally “Master Kong”, (traditionally September 28, 551 BC – 479 BC)
ဗုဒ္ဓနဲ့ခေတ်ပြိုင်လောက်ပေါ့နော..။ သူ့အတွေးအခေါ်တွေဟာ အခုခေတ်တရုတ်ပြည်ကြီးအပေါ်တော်တော်လွှမ်းမိုးတယ်လို့ မှတ်ဖူးပါတယ်..။
အခုတော့ .. သူ့ဇာတိကို ဓါတ်ပုံနဲ့တကွမြင်ဖူးသွားတာပေါ့..။
ဆက်တင်မှာတွေကို … စောင့်ဖတ်နေပါ့မယ်..။
ဟုတ်ကဲ့ .. ဗုဒ္ဓနဲ့ခောတ်ပြိုင်လောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … သူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အဆိုအမိန့်က ၁၂၀ ခု တောင်ရှိနေလို့ ဘာသာပြန်ဖို့ အချိန်ယူရအုန်းမယ် … တာအိုအယူဝါဒက ကွန်ဖြူးရှပ်ထက် စောတယ်လို့ထင်တယ် …
ကွန်ဖြူးရှပ်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုကိုတောင် အပိုင်းခွဲရမလိုဖြစ်နေတယ် .. ဓါတ်ပုံတွေ များနေလို့ …